Worldictionary 3.3.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.3.1 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Worldictionary ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
နိုင်ငံခြားဘာသာစကားသင်ယူမှုသည်တစ်စမတ်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ မည်သည့်စကားလုံးမှာသင့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့ကင်မရာကိုထောက်ပြခြင်းနှင့် Worldictionary ချက်ချင်းကြောင့်သတ်မှတ်နှင့်ဘာသာပြန်ဆိုကြလိမ့်မည်။ ကို manually စကားကိုရိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဓါတ်ပုံရိုက်ယူစရာမလိုပါ။ ဒီ app ကို on-the-သွားသင်ဘာသာပြန်ချက်ပေးရန် primed သင့်ရဲ့မရှိမဖြစ်ခရီးသွားလာ tool တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။
1. လက်ငင်း "View နှင့် Translate" feature ကိုသင်ရိုးရှင်းစွာသင်ဖွင့်ကြည့်ပါချင်နေတဲ့စကားလုံးမှာသင့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့ကင်မရာကိုညွှန်ပြခြင်းဖြင့်လက်ငင်းဘာသာပြန်ချက်ရရန်ခွင့်ပြုသည်။
ရိုးရာတရုတ်, မျက်မှောက်ရေးရာတရုတ်, အင်္ဂလိပ်, ဂျပန်, ကိုးရီးယား, ပြင်သစ်, ဂျာမနီ, အီတလီ, စပိန်, ပေါ်တူဂီ, ဒတ်ခ်, ဆှီဒငျ, ဖင်လန်, ဒိန်းမတ်နှင့်နော်ဝေး: 2. Worldictionary အထိ, 15 ဘာသာစကားများအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ဘာသာပြန်ပေးသည်။ ဒါကြောင့်ဖွင့်ကြည့်ဖို့မဆိုစကားကိုရိုက်ထည့်ရန်မလိုအပ်!
အပိုဆောင်းစကားရှာနေသို့မဟုတ်အထူးသဖြင့်စကား၌အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ပိုမို သိ. နှင့်အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် 3. ကိုသင်ပထမဦးဆုံးစာသား၏ရုပ်ပုံထားမှုဟာပြီးနောက်သင်တအာရုံစိုက်တပွင့်ကိုကြည့်ချင်သောစကားလုံးထောက်ပြနိုင်ပါတယ်။
4. ရွေးချယ်စရာရှိသည်, သင်စကားစာရိုက်ခြင်းမရှိဘဲချက်ချင်းဘာသာပြန်ချက်ရမှသင့်ဖုန်းမှပုံရိပ်တစ်ခုရွေးနိုင်သည်။
5. Worldictionary ကိုအလိုအလျောက်သင့်ရဲ့ရှာဖွေရေးမှတ်တမ်းများသိမ်းဆည်းပေးပါတယ်။ သင်ကပင်ဘာသာပြန်ချက်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စကားလုံးဒေတာဘေ့စတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။
6. Google က / ဝီကီပီးဒီးယား / YouTube ကရှာရန်ပေးအပ်ရန်
8. 15 ဘာသာစကားများအသံအသံထွက်ပံ့ပိုး။
မှတ်ချက် ကျေးဇူးပြု. : ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်သည်။
Worldictionary အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Worldictionary အား အခ်က္ျပပါ
donkarleon စတိုး 25.15k 5.67M
APK အေၾကာင္း Worldictionary အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Penpower Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://penpowerinc.us/manual/Privacy_Policy/Privacy_ENG.htm
လက်မှတ် SHA1: 9E:43:0D:98:85:01:F9:AB:4B:22:8C:A3:9A:FC:D1:72:2C:BE:0E:9C
အဖွဲ့အစည်း (O): Penpower
နယ်မြေ (L): Taiwan
Worldictionary APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ